Dota2စဆော့တော့မယျဆိုရငျ ဒါကိုဖတျပါ – Gaming Noodle
Dota2စဆော့တော့မယျဆိုရငျ ဒါကိုဖတျပါ
Dota ဂိမျးရဲ့ သကျတမျးဟာ တဈခြို့ကစားသမားတှရေဲ့ တဈသကျလောကျရှိပွီး Dota2ရယျလို့ ပွောငျးလဲခဲ့တာတော့ ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောလာပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဂိမျးတိုငျးမှာ မြိုးဆကျသဈ ကစားသမားဆိုတာ အမွဲတမျးရှိနပွေီး Dota2လို အခွကေပြွီးသား ဂိမျးမြိုးမှာ အခုမှ စဆော့မယျ့သူတှအေတှကျ အခကျအခဲက ပိုမြားပါတယျ။ သူလညျး စမျးတဝါးဝါး ကိုယျလညျး စမျးတဝါးဝါးနဲ့ အားလုံး စဆော့ရတာက လှယျသေးတယျ၊ ကိုယျ့ဂိမျးပှဲထဲက ကနျြတဲ့ ၉ ယောကျက ဆော့လာတာကွာပွီ။ ကိုယျက အခုမှ စဆော့တာဆိုရငျ အဲ့ဒီပှဲကို Enjoy ဖွဈဖို့ ခကျတဲ့အထဲမှာ Dota2လညျးပါပါတယျ။
ဒီတော့ အခု ကြှနျတျောတို့ အကွံပေးခငျြတာက Dota2ကို အခုမှ စဆော့မယျ့သူတှအေတှကျ ဆောငျရနျ၊ ရှောငျရနျ လေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Longest Dota2 Game
“ကြှနျတျော တဈနကေို့ တဈနာရီလောကျတော့ ဆော့နိုငျပါတယျ၊ တဈပတျကို သုံးရကျလောကျပေါ့” ဆိုရငျတော့ တခွား MOBA ဂိမျးတဈခုကို ရှေးပါ။ Dota2မဆော့ပါနဲ့။ Dota2ဟာ အခြိနျယူတာ အမြားဆုံး MOBA ဂိမျးပါ။ တဈပှဲကို တဈနာရီကြျော ကွာဖို့ဆိုတာ မကွာခဏကွုံတှရေ့မယျ့အပွငျ ပှဲရှာတာလညျး အခနျ့မသငျ့ရငျ ဆယျမိနဈ ကြျောလောကျထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး ဒီဂိမျးကို သသေခြောခြာဆော့ခငျြတယျဆိုရငျ သူမြားတှေ ဆော့တာကို ပုံမှနျလေးကွညျ့ပေးမှကို ဖွဈတာပါ။ ရှုပျယှကျခတျနတေဲ့ Control စနဈကိုလညျး ကိုယျ့ Muscle Memory က အလှတျရဖို့ လကေ့ငျြ့ပေးရပါတယျ။ Ability တှနေဲ့ Item တှကေို ရငျးနှီးဖို့လညျး အခြိနျအမြားကွီးယူပါတယျ။ Playtime မြားလေ ကောငျးလပေါ။
၂။ ကိုယျ့သူငယျခငျြး ကြှမျးပွီးသားလူတှနေဲ့ တှဲမဆော့ပါနဲ့
စဆော့ခါစမှာ နိုငျခငျြတာနဲ့ပဲ ကိုယျ့သူငယျခငျြး MMR မြားတဲ့ ကောငျတှနေဲ့ ပါတီသှားမဆော့ပါနဲ့။ သူတို့က ပှဲကို ရုနျးပွီး နိုငျသှားရငျတောငျ ဒီပှဲအပျေါ ကိုယျ့ရဲ့ပါဝငျမှုက “ဒီ spell ကို သုံးပေး” ဆိုတာလောကျနဲ့ ပွီးသှားဖို့ မြားပါတယျ။ နောကျပွီး တဈဖကျကလညျး MMR Balance ဖွဈအောငျ ထညျ့ပေးမှာမို့ ဟိုဘကျက ကွမျးတဲ့ကောငျတှကေ ကိုယျ့ကို ပျေါတာနဲ့ အသသေတျနဖေို့လညျး ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ဟာကိုယျ စမျးတဝါးဝါးနဲ့ ဆော့ပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ လကျရှိ Skill range ထဲက လူတှနေဲ့ပဲ အတူကမြှာဖွဈပွီး စိတျရှညျရှညျနဲ့ ဆော့ဖို့တော့ လိုပါတယျ။ လိုအပျရငျ ပှဲစတာနဲ့ ကနျြတဲ့ကိုးယောကျလုံးကို Mute ထားပွီး ကိုယျ့ဟီးရိုးကိုယျပဲ အာရုံစိုကျဆော့တာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၃။ Role ရှေးပါ
အမှနျတိုငျးပွောရရငျ MOBA ဂိမျးတှထေဲမှာ Dota2ဟာ Role ရှေးဖို့ အလှတျလပျဆုံးပါ။ ကွိုကျတဲ့ဟီးရိုးကို ကွိုကျတဲ့ Role ဆော့လို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါက ကိုယျအရမျးကြှမျးကငျြသှားမှပါ။ အစမှာတော့ ဒီဟီးရိုးနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈတဲ့ Role ကိုသာ ရှေးရမှာဖွဈပွီး ကိုယျက ဘာ Role ဆော့ခငျြတာလဲ? အဲဒီ Role အတှကျ ဘာဟီးရိုးတှကေို ဆော့တာ အမြားဆုံးလဲ? ဆိုတာကို ဂရုတစိုကျရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ ပွီးရငျ ဟီးရိုး ၃ ကောငျလောကျပဲ ထပျခါတလဲလဲကိုငျပါ။ တခွား ဟီးရိုးတှမှော ဘာ Spell တှေ ပါတယျဆိုတာ တဈခါတညျး အကုနျအလှတျရနဖေို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယျ ကိုငျတတျတဲ့ ဟီးရိုးနဲ့ ဘာ item ထညျ့ရမလဲ (item build) လောကျ သိရငျကို ဆော့လို့ရနပေါပွီ။ Beginner အဆငျ့မှာ ကိုယျ့ရဲ့ Role နဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ဟီးရိုး မရှေးဘဲ စိတျထငျရာ ကောကျ Pick လိုကျခွငျးဟာ ပှဲအစမှာတငျ အသငျးစိတျဓါတျပိုငျးကို ထိခိုကျမှုအကွီးကွီးရှိပါတယျ။ ဆော့နရေငျး နိမျ့လာရငျလညျး အပွဈပွောခံရဖို့ သခြောပါတယျ။ သူအပွဈပွောတာကို ကိုယျက ပွနျဆဲနရေငျ အဲ့ပှဲနိုငျဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
၄။ ကိုယျ့ရဲ့ Role ဟာ ဘာလုပျရလဲ လလေ့ာပါ
Role ရှေးပွီးပွီဆိုရငျတော့ ဒီ Role ဟာ ဘယျအခြိနျမှာ ဘာလုပျရလဲ ဆိုတာကို အရငျလလေ့ာပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ Youtube စသဖွငျ့ ပလကျဖောငျးတှကေနေ ဒီဟီးရိုးကို သူမြားတှေ ဘယျလိုကိုငျလဲဆိုတာ စကွညျ့သငျ့တယျ။ Dota2မှာ ရှုပျထှေးပွီး လှတျလပျတဲ့ Game Mechanism ပါဝငျတာကွောငျ့ လမျးပျေါမှာထှကျလာတဲ့ Creep ကို တောအုပျထဲက Neutral Camp နဲ့ တိုကျတာ၊ Neutral Camp ကို တဈမိနဈတဈခါ နှဈအုပျဖွဈသှားအောငျ Stack နိုငျတာ၊ နှဈမိနဈတဈခါ Rune ကောကျရတာ၊ ငါးမိနဈတဈခါ Bounty Rune ကောကျရတာနဲ့ ဆယျမိနဈတဈခါ Outpost သိမျးရတာ စသဖွငျ့ ခြိနျသားကိုကျ လုပျဆောငျမှု မွောကျမြားစှာရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါတှကေို အကုနျလုပျတတျစရာ မလိုပါဘူး။ ဘယျအခြိနျမှာ ဘာလုပျရမယျ ဆိုတာလောကျ အကွမျးဖငျြးသိထားရငျ ကိုယျ့ဘကျက တဈခုခု လုပျဖို့ ရှလြေ့ားတဲ့အခါ ကိုယျကလညျး အလိုကျသငျ့ရှလြေ့ားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၅။ ကိုယျ့ Positioning ကို အမွဲသတိထားပါ
တဈခါတလေ ကိုယျ့ကို ဒုက်ခပေးတာ ကိုယျ့အသငျးဖျော ဖွဈတတျသလို အဲ့ဒီလူက ကိုယျလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျလုပျခငျြတာကိုပဲ အာရုံစိုကျမနဘေဲ ကိုယျ့ဟီးရိုးက ကိုယျ့အသငျးဖျော ဟီးရိုးနဲ့ အရမျးကပျနလေား၊ ဟိုဘကျက Spell သုံးလာရငျ ၂ ယောကျလုံး ထိနိုငျလား၊ ကိုယျ့ဘကျက စဝငျရငျရော ကိုယျက လိုကျပါပေးနိုငျလား ဆိုတာကို အမွဲသတိထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ lane ပျေါမှာ ကိုယျက ဘယျမှာ နမေလား ညာမှာ နမေလား ဆိုတာအစ တှကျနသေငျ့ပါတယျ။
၆။ ရှုံးရငျ စိတျမညဈပါနဲ့
ခုမှ စဆော့တဲ့ဂိမျးကို ရှုံးတယျဆိုတာ မထူးဆနျးပါဘူး။ ရှုံးနတေဲ့အခြိနျမှာတောငျ ကိုယျ ဘာလုပျနိုငျမလဲ ဆိုတာကိုပဲ တှေးဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ဒါက စဆော့ခါစမှ မဟုတျဘူး၊ ကြှမျးကငျြသှားလို့ MMR တငျမယျဆိုရငျလညျး အမွဲထားရမယျ့ Mentality တဈခုပါ။ ပှဲတဈပှဲရှုံးရငျ ငါက သူတို့ထကျ ပိုကောငျးရကျနဲ့ ရှုံးရတယျလို့ တှေးပွီး အသငျးဖျောတှကေို မ Blame ပါနဲ့။ ငါသာ ပိုကောငျးကောငျးဆော့နိုငျခဲ့ရငျ နိုငျမှာဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ပှဲတလြှောကျလုံး စိတျနှဈပွီး Role အလိုကျ တာဝနျကအြေောငျ တဈဖကျအသငျးရဲ့ Flow ကို ရပျတနျ့ဖွတျတောကျနိုငျအောငျသာ ကွိုးစားပါ။ ဆော့တာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့ တိုးတကျလာပါလိမျ့မယျ။
အခုမှ Dota2စဆော့မယျ့ သူတှကေိုလညျး ကြှနျတျောတို့ ခတျေကာလရဲ့ အကောငျးဆုံး ဗီဒီယိုဂိမျး စနဈတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ဒီဂိမျးကို ဆော့ခငျြရငျ ဆော့ကွညျ့ကွပါလို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ကစားရသလို Event တှလေညျး ရှားပါးပမေယျ့ သူ့ရဲ့ Gameplay က Community ထဲမှာ ဆယျစုနှဈ ၂ ခုနီးပါး အအောငျမွငျဆုံး မာလျတီပလယော ဂိမျးတဈခုအဖွဈ ရပျတညျနနေိုငျသေးတာ၊ Loyal Fanbase ကွီး ရှိနတောကိုကွညျ့ရငျ ဘယျလောကျဆှဲဆောငျနိုငျလဲ ဆိုတာ သိမှာပါပဲ။ အပျေါက အကွံပေးခကျြတှကေ လူတိုငျးတှရေ့တတျတဲ့ ယဘေုယြ အမှားတှဖွေဈပါတယျ။ ဆော့နခြေိနျမှာ တခြိနျလုံး ဦးနှောကျကိုပါ အလုပျပေးနရေတာက ဒီဂိမျးရဲ့ အားသာခကျြတဈခုပါ။
#GamingNoodle #Kyitha #Dota2BeginnerGuide
Dota2စဆော့တော့မယ်ဆိုရင် ဒါကိုဖတ်ပါ
Dota ဂိမ်းရဲ့ သက်တမ်းဟာ တစ်ချို့ကစားသမားတွေရဲ့ တစ်သက်လောက်ရှိပြီး Dota2ရယ်လို့ ပြောင်းလဲခဲ့တာတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်းတိုင်းမှာ မျိုးဆက်သစ် ကစားသမားဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိနေပြီး Dota2လို အခြေကျပြီးသား ဂိမ်းမျိုးမှာ အခုမှ စဆော့မယ့်သူတွေအတွက် အခက်အခဲက ပိုများပါတယ်။ သူလည်း စမ်းတဝါးဝါး ကိုယ်လည်း စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ အားလုံး စဆော့ရတာက လွယ်သေးတယ်၊ ကိုယ့်ဂိမ်းပွဲထဲက ကျန်တဲ့ ၉ ယောက်က ဆော့လာတာကြာပြီ။ ကိုယ်က အခုမှ စဆော့တာဆိုရင် အဲ့ဒီပွဲကို Enjoy ဖြစ်ဖို့ ခက်တဲ့အထဲမှာ Dota2လည်းပါပါတယ်။
ဒီတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ အကြံပေးချင်တာက Dota2ကို အခုမှ စဆော့မယ့်သူတွေအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော် တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက်တော့ ဆော့နိုင်ပါတယ်၊ တစ်ပတ်ကို သုံးရက်လောက်ပေါ့” ဆိုရင်တော့ တခြား MOBA ဂိမ်းတစ်ခုကို ရွေးပါ။ Dota2မဆော့ပါနဲ့။ Dota2ဟာ အချိန်ယူတာ အများဆုံး MOBA ဂိမ်းပါ။ တစ်ပွဲကို တစ်နာရီကျော် ကြာဖို့ဆိုတာ မကြာခဏကြုံတွေ့ရမယ့်အပြင် ပွဲရှာတာလည်း အခန့်မသင့်ရင် ဆယ်မိနစ် ကျော်လောက်ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီဂိမ်းကို သေသေချာချာဆော့ချင်တယ်ဆိုရင် သူများတွေ ဆော့တာကို ပုံမှန်လေးကြည့်ပေးမှကို ဖြစ်တာပါ။ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ Control စနစ်ကိုလည်း ကိုယ့် Muscle Memory က အလွတ်ရဖို့ လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။ Ability တွေနဲ့ Item တွေကို ရင်းနှီးဖို့လည်း အချိန်အများကြီးယူပါတယ်။ Playtime များလေ ကောင်းလေပါ။
၂။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ကျွမ်းပြီးသားလူတွေနဲ့ တွဲမဆော့ပါနဲ့
စဆော့ခါစမှာ နိုင်ချင်တာနဲ့ပဲ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း MMR များတဲ့ ကောင်တွေနဲ့ ပါတီသွားမဆော့ပါနဲ့။ သူတို့က ပွဲကို ရုန်းပြီး နိုင်သွားရင်တောင် ဒီပွဲအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်မှုက “ဒီ spell ကို သုံးပေး” ဆိုတာလောက်နဲ့ ပြီးသွားဖို့ များပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ဖက်ကလည်း MMR Balance ဖြစ်အောင် ထည့်ပေးမှာမို့ ဟိုဘက်က ကြမ်းတဲ့ကောင်တွေက ကိုယ့်ကို ပေါ်တာနဲ့ အသေသတ်နေဖို့လည်း ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ ဆော့ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ Skill range ထဲက လူတွေနဲ့ပဲ အတူကျမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆော့ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ပွဲစတာနဲ့ ကျန်တဲ့ကိုးယောက်လုံးကို Mute ထားပြီး ကိုယ့်ဟီးရိုးကိုယ်ပဲ အာရုံစိုက်ဆော့တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၃။ Role ရွေးပါ
အမှန်တိုင်းပြောရရင် MOBA ဂိမ်းတွေထဲမှာ Dota2ဟာ Role ရွေးဖို့ အလွတ်လပ်ဆုံးပါ။ ကြိုက်တဲ့ဟီးရိုးကို ကြိုက်တဲ့ Role ဆော့လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက ကိုယ်အရမ်းကျွမ်းကျင်သွားမှပါ။ အစမှာတော့ ဒီဟီးရိုးနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Role ကိုသာ ရွေးရမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်က ဘာ Role ဆော့ချင်တာလဲ? အဲဒီ Role အတွက် ဘာဟီးရိုးတွေကို ဆော့တာ အများဆုံးလဲ? ဆိုတာကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဟီးရိုး ၃ ကောင်လောက်ပဲ ထပ်ခါတလဲလဲကိုင်ပါ။ တခြား ဟီးရိုးတွေမှာ ဘာ Spell တွေ ပါတယ်ဆိုတာ တစ်ခါတည်း အကုန်အလွတ်ရနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ် ကိုင်တတ်တဲ့ ဟီးရိုးနဲ့ ဘာ item ထည့်ရမလဲ (item build) လောက် သိရင်ကို ဆော့လို့ရနေပါပြီ။ Beginner အဆင့်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Role နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဟီးရိုး မရွေးဘဲ စိတ်ထင်ရာ ကောက် Pick လိုက်ခြင်းဟာ ပွဲအစမှာတင် အသင်းစိတ်ဓါတ်ပိုင်းကို ထိခိုက်မှုအကြီးကြီးရှိပါတယ်။ ဆော့နေရင်း နိမ့်လာရင်လည်း အပြစ်ပြောခံရဖို့ သေချာပါတယ်။ သူအပြစ်ပြောတာကို ကိုယ်က ပြန်ဆဲနေရင် အဲ့ပွဲနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
၄။ ကိုယ့်ရဲ့ Role ဟာ ဘာလုပ်ရလဲ လေ့လာပါ
Role ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒီ Role ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရလဲ ဆိုတာကို အရင်လေ့လာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Youtube စသဖြင့် ပလက်ဖောင်းတွေကနေ ဒီဟီးရိုးကို သူများတွေ ဘယ်လိုကိုင်လဲဆိုတာ စကြည့်သင့်တယ်။ Dota2မှာ ရှုပ်ထွေးပြီး လွတ်လပ်တဲ့ Game Mechanism ပါဝင်တာကြောင့် လမ်းပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ Creep ကို တောအုပ်ထဲက Neutral Camp နဲ့ တိုက်တာ၊ Neutral Camp ကို တစ်မိနစ်တစ်ခါ နှစ်အုပ်ဖြစ်သွားအောင် Stack နိုင်တာ၊ နှစ်မိနစ်တစ်ခါ Rune ကောက်ရတာ၊ ငါးမိနစ်တစ်ခါ Bounty Rune ကောက်ရတာနဲ့ ဆယ်မိနစ်တစ်ခါ Outpost သိမ်းရတာ စသဖြင့် ချိန်သားကိုက် လုပ်ဆောင်မှု မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေကို အကုန်လုပ်တတ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာလောက် အကြမ်းဖျင်းသိထားရင် ကိုယ့်ဘက်က တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ရွှေ့လျားတဲ့အခါ ကိုယ်ကလည်း အလိုက်သင့်ရွှေ့လျားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကိုယ့် Positioning ကို အမြဲသတိထားပါ
တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးတာ ကိုယ့်အသင်းဖော် ဖြစ်တတ်သလို အဲ့ဒီလူက ကိုယ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုပဲ အာရုံစိုက်မနေဘဲ ကိုယ့်ဟီးရိုးက ကိုယ့်အသင်းဖော် ဟီးရိုးနဲ့ အရမ်းကပ်နေလား၊ ဟိုဘက်က Spell သုံးလာရင် ၂ ယောက်လုံး ထိနိုင်လား၊ ကိုယ့်ဘက်က စဝင်ရင်ရော ကိုယ်က လိုက်ပါပေးနိုင်လား ဆိုတာကို အမြဲသတိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ lane ပေါ်မှာ ကိုယ်က ဘယ်မှာ နေမလား ညာမှာ နေမလား ဆိုတာအစ တွက်နေသင့်ပါတယ်။
၆။ ရှုံးရင် စိတ်မညစ်ပါနဲ့
ခုမှ စဆော့တဲ့ဂိမ်းကို ရှုံးတယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ကိုယ် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ တွေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒါက စဆော့ခါစမှ မဟုတ်ဘူး၊ ကျွမ်းကျင်သွားလို့ MMR တင်မယ်ဆိုရင်လည်း အမြဲထားရမယ့် Mentality တစ်ခုပါ။ ပွဲတစ်ပွဲရှုံးရင် ငါက သူတို့ထက် ပိုကောင်းရက်နဲ့ ရှုံးရတယ်လို့ တွေးပြီး အသင်းဖော်တွေကို မ Blame ပါနဲ့။ ငါသာ ပိုကောင်းကောင်းဆော့နိုင်ခဲ့ရင် နိုင်မှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပွဲတလျှောက်လုံး စိတ်နှစ်ပြီး Role အလိုက် တာဝန်ကျေအောင် တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ Flow ကို ရပ်တန့်ဖြတ်တောက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပါ။ ဆော့တာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
အခုမှ Dota2စဆော့မယ့် သူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ကာလရဲ့ အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုဂိမ်း စနစ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီဂိမ်းကို ဆော့ချင်ရင် ဆော့ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကစားရသလို Event တွေလည်း ရှားပါးပေမယ့် သူ့ရဲ့ Gameplay က Community ထဲမှာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုနီးပါး အအောင်မြင်ဆုံး မာလ်တီပလေယာ ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်သေးတာ၊ Loyal Fanbase ကြီး ရှိနေတာကိုကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်နိုင်လဲ ဆိုတာ သိမှာပါပဲ။ အပေါ်က အကြံပေးချက်တွေက လူတိုင်းတွေ့ရတတ်တဲ့ ယေဘုယျ အမှားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့နေချိန်မှာ တချိန်လုံး ဦးနှောက်ကိုပါ အလုပ်ပေးနေရတာက ဒီဂိမ်းရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။